Iseluleko sezobuchwepheshe esivela ku-Semalt On Indlela Yokuvikela Iwebhusayithi Ye-WordPress Evela Ezigamekweni ZaseCyber
Ukuphepha kwe-WordPress kuvame ukubizwa ngokuthi "ukuqina". Ngisho noma ungazi ukuthi ungayithuthukisa kanjaniibhulogi lakho lewebhu, kubalulekile ukuthi uvikele iziqiniseko zesayithi lakho. Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi izigidi ezigidigidi zamawebhusayithizinikwe amandla yi-Blogger noma i-WordPress.
Nik Chaykovskiy, The i-Semalt Imenenja yePhasimende eMpumelelo enkulu, ithi iZwiPress yilona isikhombimsebenzisi esidumile kakhulu futhi esinobuhlakani. Lolu hlelo lokuphatha okuqukethwe lunokuningiizinzuzo nezinkinga. Isibonelo, uma ungagcini amaphasiwedi akho ephephile, ungase ulahlekelwe iziqinisekiso zakho futhi ufinyelele kuwebhusayithi yakho.Nazi ezinye izicebiso zendlela yokuvikela iwebhusayithi yakho ye-WordPress kubaduni.
Emuva Up Iwebhusayithi Yakho Ngokuvamile
Ukuvama kwama-backup e-WordPress kungenye yezihloko ezikhulunywe kakhulu kulezi zinsuku.Kubalulekile ukuthi isayithi lakho le-WordPress lisekelwe kahle. Kufanele ukwenze kanye noma kabili ngesonto ukuhlala uphephile futhi uvikelekile kwi-intanethi.Ukusekelwa kwansuku zonke, kunconywa kakhulu njengoba kuvikela iwebhusayithi yakho kusuka ekukhunjweni okungenzeka kanye nokuhlaselwa kwe-malware. Kukhona okuningiAma-plugin we-WordPress angakusiza nge-back, kodwa i-BackupBuddy ingenye yezinto ezihamba phambili. Ngeke ukhokhe imali engaphezu kwama- $ 100 futhi ungabuyiselaibhulogi evinjelwe noma i-website kumane nje ngemizuzwana nje. Ukulungele! Isipele kuyinto ipulazi ekahle kulabo abafuna software free WordPress.Lokhu kukuvumela ukuba udale isipele ngokuzenzakalela, thumela amafayela akho kuDropbox, bese ubuyisela idatha yakho ngesikhathi esithile..Indlela yesithathu i-UpdraftPlus.Kuyinto i-plugin ye-backup yokusebenzisana neyomsebenzisi.
Nciphisa ukungena ngemvume
Ngezikhathi ezithile, abaduni bazama ukuphula amawebhusayithi wakho we-WordPress ngokuqagela kwakhoamaphasiwedi. Yingakho kufanele ukhawule imizamo yokungena ngemvume ukuze uhlale uphephile ku-inthanethi. Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress ingakuvumela ukuthi usebenzise amaphasiwedi ahlukene,okuhlose ukugcina imininingwane yakho iphephile futhi ivikelekile. Kufanele ungeze ungqimba olungeziwe lokuphepha kuwebhusayithi yakho ngokunciphisa ukufinyelela kokubili kuya kukathathu. Uma kwenzeka, othile uzame ukungena ngemvume ngephasiwedi engalungile, isayithi lakho lizovala, kodwa idatha yalo izohlala iphephile. Kukhona ainombolo enkulu yama-plugin we-WordPress, njenge-Limit Login Attempts. Lokho kukuvumela ukuba unciphise inani lemizamo yokungena ngemvume engaphumeleli. Ukusebenzisa le plugin, wenakungabuye kuvimbele ama-IP amaningi, kodwa kubalulekile ukuthi ukhumbule iphasiwedi yakho. Futhi uma abaduni besebenzisa ama-proxies ahlukene, le plugin ingabezivimbele ngokuzenzakalelayo bonke ukugcina iwebhusayithi yakho iphephile. Zonke izinketho zayo ziyi-customizable futhi zisebenza ngomsebenzisi. Ungavimbela i-IP okwesikhashana nomaunomphela.
Ungasebenzisi "admin" njengegama lakho lomsebenzisi
Enye yeziphambeko ezinkulu abantu abazenzayo ukuthi basebenzisa "admin" njengegama lomsebenzisi.Akufanele wenze njalo uma ufuna ukugcina iwebhusayithi yakho ye-WordPress ephephile. Ama-bots ajwayelekile afinyelela kumawebhusayithi esebenzisa leli gama futhi kungenzekaukuqagela amaphasiwedi nganoma yisiphi isikhathi. Kunamathuba abaduni abazosebenzisa ulwazi lwakho oluyimfihlakalo, idatha yewebhu, nezinye izinto usebenzisa lokhuigama lomsebenzisi. Uma ufuna ukugcina isayithi lakho liphephile, kubalulekile ukuthi ungalokothi usebenzise i- "admin" njengegama lakho lomsebenzisi oyinhloko. Kunalokho, kufanelekhetha igama lomsebenzisi nephasiwedi, okungenakwenzeka ukuqagela yinoma ubani.